Mapatya ANC, Fresh´n Rebel inochinja modhi yayo yekubudirira | Gadget Nhau
Mapatya ANC, Fresh´n Rebel inochinja modhi yayo yekubudirira
Miguel Hernandez | 10/06/2021 11:30 | Yakagadziridzwa ku 10/06/2021 12:46 | General, Reviews
Inoperekedza iyo ichangoburwa kuvhurwa kwe Nyowani Rebel Clam Elite, Iyo femu yakasarudza zvakare kupa mweya wekufema mweya kune iyo Twins renji, yayo yakajeka yakagadzirirwa ANC mahedhifoni akaunganidza akawanda akanaka ongororo. Iye zvino ivo vanozove neyakawedzera ficha iyo ichaita kuti kutenga kwako kutonyanya kukwezva, kushingaira ruzha kukanzurwa.
Isu takaongorora zvakadzama mapatya matsva ANC kubva kuFresh´n Rebel, yechokwadi isina waya mahedhifoni ane kudzima ruzha uye dhizaini inonakidza. Gara nesu uye uwane nhau kuti Fresh'n Rebel yatsvaga iyi TWS headset modhi yataitoziva kare.
3 Ruzha kukanzurwa uye odhiyo kutonga
4 Unhu hwemumhanzi uye ruzivo rwevashandisi
5 Maonero emupepeti
Mune ino kesi Fresh´n Rebel yasarudza kubheja pane yayo inozivikanwa renji yemavara, tichava navo anowanikwa, rimwe nerimwe riine zita raro rekutengesa mumatoni anotevera: Goridhe, pink, girini, tsvuku, bhuruu uye nhema. Mune ino kesi, iro bhokisi rave nekugadziriswazve kukuru, kubva pakuve iri yepamusoro yekuvhura system kune "shell" maitiro. Bhokisi racho rine macompact akaenzana nemakuru mahombe ekuchengetedza zviri nyore. Kune chikamu chayo, mukati medu tichava nechiratidziro cheLED chemamiriro emahedhifoni pamwe neiyo yekubatanidza bhatani.
Iwo mahedhifoni ari mu-nzeve, yakajairika tonic kune mahedhifoni TWS pavanenge vaine ruzha kudzima. Ivo vane dhizaini iyo ichave inozivikanwa kwatiri, pasina kunyanyisa kureba, ivo vakafara kwazvo. Kana zviri zvekunyaradza, iwo akareruka uye ane akasiyana mapedhi, saka hatizove nematambudziko mukuiswa kwavo. Huremu hwese hwechigadzirwa i70 gramu, kunyangwe isu tisingazive zvese zviyero chaizvo zvechaji yekuchaja uye huremu hwemahedhifoni zvakasiyana. Nekudaro, isu tinofanirwa kusimbisa kuti tinoshora mvura, ziya uye guruva neIP54 chitupa, saka tinogona kuzvishandisa kudzidzisa pasina matambudziko.
Semazuva ese, isu hatizive iyo chaiyo vhezheni yeiyo MAKARALI USB iyo inotasva, kunyangwe ichifunga nezve pairing kumhanya uye kuzvitonga, zvese zvinoratidza kuti Fresh'n Rebel yasarudza iyo Bluetooth 5.0 yakajairika. Isu tine proximity sensors iyo inomisa iyo multimedia zvemukati kana isu tangoibvisa munzeve dzedu, zvakafanana zvichaitika kana tazvidzorera, kuti mumhanzi ucharamba uchirira kubva ipapo kwayaive. Chii chimwe, mahedhifoni ari Dhiviri Tenzindiko kuti, dzinogona kushandiswa zvakasiyana sezvo zvese zviri zviviri zvichibatana zvakananga neiyo odhiyo sosi.
Nezve kuzvitonga, isu hatina dhata maererano nekwaniso iri mAh, asi isu takawana kwakatenderedza maawa manomwe ekuzvimiririra nemahedhifoni muchikamu chimwe chete, lMucherechedzo unovimbisa pakati pemaawa manomwe nema7 zvichienderana nemamiriro ekudzimisa ruzha atakaita, data yakafananidza kuongorora kwedu. Kana tikaverenga mhosva dzakapihwa nenyaya iyi, kuzvitonga kunowedzerwa kusvika kumaawa angangoita makumi matatu kana tikasaita ANC, iyo inogona kudzikira kusvika kumaawa makumi maviri neshanu kana tikamugonesa. Kune chikamu chayo, iyo yakazara kuchaja kwebhokisi ichave maawa maviri, ingangoita awa nehafu kana tichida kubhadharisa zvizere mahedhifoni.
Ruzha kukanzurwa uye odhiyo kutonga
Kuchenesa ruzha kunouya mukuita kana isu tachigadzira, nekuda kweizvi isu tinobata mahedhifoni, sezvo vaine yekubata pani. Uye zvakare, isu tinokwanisa kusarudza «Yemamiriro ekunze» iyo inotora chikamu cheruzha kuburikidza nemakrofoni kuitira kuti ipe isina njodzi nzira yekuzvitsaura kune mamwe mamiriro.
Yakajairwa ruzha kukanzurwa: Ichadzima ruzha rwese nehukuru hwepamusoro.
Ambient Mode: Iyi modhi inodzima ruzha rwunogumburisa nekudzokorora asi ichatibvumidza kutora hurukuro kana chenjedzo kubva kunze.
Kuregererwa kweruzha kwakakwanira pamutengo wemitengo isu tiri kubata, Zviripachena kuti ivo vari kure kure nedzimwe nzira dzakadai seAirPods Pro, zvisinei, sekureba sekunge isu tichiisa mapadhi zvakanaka, kudzimiswa kweruzha kunokwezva zvakakwana. Izvo zvinoita sekunge hazvikanganise zvisirizvo mabass uye nepakati mukuyedzwa kwedu, kunyangwe isu tichimira kuona mamwe matoni akaomarara. Muchikamu chino isu hatigone kuzvipa mhosva kana tikatarisa pamusika uye mutengo unopihwa nedzimwe nzira nekumisikidza ruzha kukanzura kwatinogona kubvunza.
Unhu hwemumhanzi uye ruzivo rwevashandisi
Izvo zvinoshayikwa kuti Fresh'n Rebel asarudza kubatanidza maTwins ANC mune tsika yekuenzanisa iyo yatinowana muClam Elite. Kunyange zvakadaro, mahedhifoni anosvika zvakanaka kuti aenzane navo, kunyangwe sezvazvinoitika kazhinji mumhando iyi yezvigadzirwa, ivo vakagadzirirwa zvakanyanya kuti vape mhedzisiro zvirinani nazvino mimhanzi yekutengesa. Isu tine yakanaka bass kuvepo uye yakanyanya kukwirira yakanyanya vhoriyamu, chimwe chinhu chinoshamisa tichifunga kuti isu tichachisanganisawo neanoshanda ruzha kukanzurwa.
Padanho rekubatanidza ivo havana kumboburitsa dambudziko, batanidza nekukurumidza uye zvakapusa, sekunge uriko Dhiviri Tenzi Isu takakwanisa kutora mukana wayo kuti dzimwe nguva tisangane imwe chete yemahedhifoni. Ivo vanokurumidza kubatana kune odhiyo sosi nenzira imwechete iyo yavanobvisa uye kumisa mimhanzi patinovaisa mune iyo kesi, muchikamu chino chiitiko chakanakirwa. Padanho rekutora izwi redu kuburikidza nemakrofoni, ivo vakaringana kubata hurukuro, kunyangwe ichi chisiri chirevo chayo chinonyanya kushamisa, hazvipe chiitiko chatinogona kuongorora sechakaipa.
uye chokwadi ndechekuti havasi kusiya chero chikamu chine kuravira kwakashata mumuromo mukutarisa kwachiri. Iyo yekuchaja kesi yakasununguka, inochinjika uye yakasimba. Kune chikamu chayo, mahedhifoni ari munzeve, chimwe chinhu chinenge chinosungirwa mumahedhifoni eANC uye inowira mukati meyakajairika parameter. Pasina mubvunzo chibvumirano chitsva uye chinokwezva zvakare kubva kuchiratidzo chakanyanya kutarisa kune veruzhinji vechidiki icho chakanangana nekugadzira ruzivo rwakapoteredzwa, pasina kunyepedzera kwakawanda asi izvo zvinozadzisa izvo chaizvo zvave zvichivimbisa.
Yakatumirwa pa: 10 June we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 10 June we2021
Hapana muripo Qi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Mapatya ANC, Fresh´n Rebel inochinja modhi yayo yekubudirira
Clam Elite, imwe sarudzo neANC nerubatsiro rweFresh'n Rebel
Yealink UVC20, shamwari yakanaka ye teleworking [Ongororo]